Banyere Yurie BSF - Nkuzi nke Maggot mbụ nke ụwa
Banyere Yurie BSF
Banyere anyị - Banyere Yurie BSF bụ naanị ụlọ ọrụ ahụ kwalitere ụwa nke oge a na-enweghị ihe ọgbara ọhụrụ nke BSF. Usoro 10 karịrị Yurie BSF dịka ụgbọ ihe na-aga nke ọma maka nsị nke BSF oge a na-enweghị isi. Anyị na-azụlite ahihia na-enweghị isi nke ụmụ ahụhụ na-efe efe.
Na usoro ịzụlite ikpuru na-enweghị isi ísì
Ahịa ahịa, RT
Anụ nri anụ na
Nwepu ụlọ ọrụ
Enweghị gbaa ụka, na-enweghị ọgwụ ọjọọ na enweghị igwe. Site na mgbasa ozi ma ọ bụ mkpụrụ na-abụghị nke dị mfe n'ihi na ọtụtụ na-adị n'ebe niile ma na-eleghara anya.
Ọbụna usoro mgbasa ozi atọ nwere nsogbu na gburugburu ebe obibi dị ncha, ruru unyi na ọnyụọ. Ihe nchoputa anyi mere na ndi oru mgbasaozi ato bu ebumnuche nke izoputa ka ndi oru ugbo nwere ike inweta uru karia n'ihi na ihe ndi ozo adighi ka enwere onwe ha.
Ọ bụkwa ngosipụta nke nchegbu Yurie BSF banyere nsogbu nke mkpofu, ihe mkpofu na mmiri nsị na Indonesia. Olileanya anyị bụ na usoro a na-enweghị isi na-esi na ya eme ihe nwere ike ịbụ otu ngwọta maka anyị nile iji mee ka ndị Indonesia dị ọcha.
Anyị na-ahụ ọhụụ na ozi anyị n'ụzọ doro anya na okwu anyị, ekele na CLEAN MY INDONESIAN. Site n'inwe ahihia na-enweghị isi, a na-atụ anya na azụ, anụ ọkụkọ na ndị ọrụ ugbo na-emepụta nri ga-enwe onwe ha n'inye nri, nri nke bara ụba na nri na nnukwu protein ma na-akwụ ụgwọ naanị Rp.
Na oke ego a, a na-atụ anya ka ndị ọrụ ugbo nwekwuo atụmanya ịzụlite na ịba ụba anụ ụlọ ha. N'ihi na ọ dị ugbu a, ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-abaghị uru n'ihi na ha enweghị ike ịnye ego ha nri.
Nri anu anumanu bu mmeputa nke puru iru 70%. Nke a ka na-agụta akwụkwọ. Ndị na-amalite ego a nwere ike ịbawanye ruo 80%.
Nke a bụ n'ezie ihe ize ndụ n'ihi na:
ọnwụ anụ ụlọ
na-ere ahịa ahịa
A ghaghị iburu ihe ndị ọzọ n'uche.
Maggot ihe ubi bụ ihe nketa ndị Indonesian nyere anyị. Naanị ebe ọ bụ na n'oge ochie, ha dọrọ aka ná ntị na ọ bụrụ na anụ ọhịa enwee ihe ịga nke ọma, ọ ga-achọ nri anụ ahụ na ụdị mgbochi ọzọ.
A na-ederede ozi a n'ụzọ doro anya na akwụkwọ ọ bụla e bipụtara na njikwa isi nri na-ere na ụlọ ahịa. Ejiri akwukwo ndi ozo di iche iche anyi meputara site na usoro nke ihe ubi na-acho n'ime usoro ihe ubi nke BSF.
Usoro Mgbochi Maggot
Ọgbara ọhụrụ BSF nke oge a na-enweghị isi, ma ọ bụghị nchọta dị ukwuu ma magot-maggot emepụtara dị mma n'ihi na a na-echekwa ya nke ọma. Meekwa ka nchebe nke azụmahịa ogologo oge, nke na-enweghị isi, ihe bara ụba ma na-akwụ ụgwọ.
Isi a na-eme n'ime ihe ndị na-eme ka a na-eri nri bụ oké ihe ize ndụ n'ịga n'ihu ahịa nke ịnye ndepụta dị ala. Ubi nke ahihia odorless, na-eme ka ọ ghara iru ala maka ndị ọrụ ugbo, na-akpọkwa pests ndị dị ka oke, nchịkwa, agwọ na ahụike maka ndị ọrụ ugbo n'onwe ha.
Achọghị ikwu na mmetọ ọjọọ ahụ kpatara ga-eme ka ndị ezinụlọ na-eme mkpesa, nakwa na obodo agaghị agbachi nkịtị ma ọ bụrụ na mmetọ ọjọọ a na-agbasa ebe niile. E nwere ọtụtụ ihe atụ nke ikpe na mpaghara ụfọdụ nke azụmahịa maggot mgbe njem ọ bụla kwa afọ na ngosipụta nke obodo ma na-emechi.
Ọnọdụ a dị nnọọ njọ, na efu ọrụ siri ike a lụrụ agha. Ya mere, kemgbe mmalite, jide n'aka na ị na-eme atụmatụ azụmahịa n'enweghị isi ísì. Ọ bụrụ na ọ bụghị na ị na-eme atụmatụ na akụ na ụba nke azụmahịa.
Na mgbalị iji nweta nrọ anyị SAVE na CLEAN MY INDONESIAN. Enwere usoro ihe omume 10 nke a na-ahazi SOP (usoro ọrụ arụmọrụ) iji kwado mmejuputa ọrụ nkịta kwa ụbọchị.
Ka ọ dị ugbu a, anyị agbasawo karịa obodo 99 n'obodo Indonesia. Naanị ịhọrọ ebe kacha nso ebe ị bi.
Banyere 10 Uru nke Yurie BSF
1. Ọtụtụ Maggot mmepụta na-enweghị isi.
A ga-eduzi gị site na zero ka ị nwee ike ịmepụta ikpuru na-enweghị isi, na-amalite site na ịmụta itinye aka na nyocha nke ị nwere ike ịhọrọ na 99 n'obodo Indonesia.
Kwa ụbọchị, ị ga-eme ngwa ngwa na onye nkụzi onwe (ọ bụghị usoro klas) na-aga n'ihu na nduzi bara uru n'ụlọ ruo mgbe ị ga-eme nke ọma. Mgbe ahụ Ihe omuma nke ịmụta n'onwe akwukwo Odighi Maggot Cultivation bu:
Lekwasị anya na gị
Ndị ọkachamara nwere ahụmahụ ga-enye gị nlekọta pụrụ iche ka i wee nwee ike ijide n'aka onye nkụzi ahụ na ị na-ahụ maka ihe ị na-achọ ma na-atụ anya ya.
Usoro nkeonwe a na-enye ndị nduzi aka inye ngwọta ngwa ngwa karịa usoro klas nke ụlọ ọrụ.
A na-enye akwụkwọ nduzi akwụkwọ omume ma nwee ike ịgụ ya site na ngwa Yurie BSF na ụlọ ahịa. Na-enye gị ohere ịmụtakwu ahụ iru ala ma nwee obi ike tupu ị rụọ ọrụ n'ugbo
Best Practent Mentor
Ị ga-anọ na-eduzi ndị nduzi kachasị mma bụ ndị nwere ihe ịga nke ọma n'ịzụlite BSF oge a n'enweghị isi ísì. Ndị na-anụ ọkụ n'obi maka ịkọ ahụmahụ. Nke a bara uru nke ukwuu maka gị, n'ihi na ha nwere ike igosi otú omume ịzụlite ikpuru na-enweghị isi na nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Usoro a ga-ebuwanye ibu melite nsogbu gị na-edozi nkà gị na-arụ kwa ụbọchị n'ụlọ mgbe ị gwụchara omume ahụ.
Uzo Ozuzu Izu
Ị na-amụ ma na-amụ ihe zuru oke ebe ebe kachasị ọtụtụ ebe.
Enwere ike ịme ihe a na-enweghị ike iji mepụta ihe na-enweghị egwu nke ndị ezinaụlọ sitere na ezinụlọ na ọha mmadụ n'ihi na e mere ya n'ejighị ísì.
Ọbụna ụfọdụ n'ime ha na-ebu ahịhịa na-emepụta n'ime ụlọ site na iji nwata ime ihe.
N'ebe a, a kụziiri gị ka ị nwee ike ịzụlite na ohere dị iche iche nke ala na ọtụtụ ndị mmadụ na-enweghị atụ n'emeghị egwu nke ngosi.
Inwekwu Obi Ike
Dabere na ahụmahụ, otu n'ime ihe kpatara ọdịda bụ ihere nke ịjụ ma na-ejikwa usoro nkeonwe a, enwere ike idozi ihe. N'ihi na naanị gị na onye nkụzi ahụ bụ ma ka ị nwee ike ime ka obi sie gị ike ịmụ ihe n'enweghị ụjọ ma ọ bụ ihere ịjụ
Onye Mentor nke Kwesịrị Ekwesị
Ị nwere ike ịhọrọ onye nkụzi kachasị mma na obodo 99, nwee nhọrọ nke nkụzi 99 na ịchọrọ na nke kachasị mma.
Onye nduzi a zụrụ azụ nwere ike inye ahụmahụ dịka nsogbu ndị dị n'obodo ha. nke a ga-ekwe omume n'ihi na gị na onye nkụzi nọ n'ebe dị nso ka a mata nsogbu nsogbu ubi.
Ị kpebiri ụbọchị na ụbọchị, ya mere ọ gaghị egbochi ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ.
Nnwere onwe nke mkparịta ụka
I nwere ohere ikwurịta maka na onye nkụzi gị ga-aghọta ma nye nkwado dị mkpa
2. Ụdị Ngwakọta Nhazi Chekwaa 83%
Mgbe i nwere ikpuru, a ga-atụ gị ụra, nwere ike ịjikọ BSF maggot na usoro pụrụ iche ma zọpụta ya ruo 83%
Okwesighi ka i ghaghi itughari uche banyere ikuku ahia. BỤ BSF NA YURIE !!! Anyị na-anakwere ire ere na-azụta nkuru gị Rp7.000 / kg
4. Ọganihu Business
Ọ bụrụ na ị na-eji ọkụ na-ere ere na Yurie BSF. Ọzọkwa, anyị kwadebere usoro enyemaka maka ịzụlite azụmahịa azụ. Enyemaka mbụ nke Rp100.000.000 ka eji eme ka mmepụta mmepụta.
Enyere enyemaka enyi gị na PAID site na iji MAGGOT. Na otu uru NA-ENWEGHỊ ọkụ - Na-enweghị RIBA !!!
5. Onye nnochite anya Yurie BSF
Na-eme kwa ụbọchị, mgbe ụfọdụ ọ na-enweghị ike ịwepụ ya na nsogbu ahụ ka edozi ya. Tinyere onye nnọchianya Yurie BSF, ị dị njikere ịnọnyere n'ugbo gị iji dozie nsogbu ndị chere ihu.
Ọganihu dị elu na usoro nke njikwa njikwa na-aga n'ihu. N'ihi nke a, usoro a bụ iji hụ na ikuku emepụtara dị mma. Site n'inye ọzụzụ dị elu n'ọkwa dị elu.
Iji ghọọ akụkụ nke ahịa ụwa anyị na-akwadebe ndị na-akwado ndị Indonesian. Nke ahụ ga-abụ ebe maka ịzụ ma na-ere obodo nke ndị enyi Yurie BSF.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịghọ akụkụ nke mmepe nke azụmahịa agro-ụlọ ọrụ na-enwe ike iru ihe ndị ụlọ ahịa na nke ụwa na-achọ.
Ọrụ Mmekọ Ọrụ nke (CSR) kpọmkwem maka ndị na-enweghị ike ịzụta ihe ọgbara ọhụrụ BSF n'oge a na-enweghị isi.
10. Na-ekpe ekpere na-agbalị
Anyị ga-ekpe ekpere na ọ bụla Allah na-echebe anyị ka ọ bụla anyị na-eme.
Na nkewa dị iche iche Yurie BSF na-emepụta ntanetị pụrụ iche na usoro mmepe BSF magot. N'ihi nke a Nke a na-elekwasị anya na mmepụta nke mma kacha mma magot site na iji ihe mkpofu ahihia na-arụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ nri na ụlọ ọrụ ndị a ma ama na Indonesia na ụwa. Yurie BSF mepee ohere iji mekota ya na otutu ndi ozo iji nọgide na-azụlite mmepụta na ahia nke oke.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị biko kpọtụrụ anyị.
Iji Nri Efere Mmanụ Eji Eji Nri
Esi mụọ Sangkuriang 2019 Catfish
Ụzọ dị mfe na nke bara uru iji mee EM4 naanị n'ụlọ